Hawaii Inozivisa Mazano Matsva kune Vafambi Vepasirese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii Inozivisa Mazano Matsva kune Vafambi Vepasirese
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Nhasi Gavhuna weHawaii Ige akazivisa zvitsva zvinodikanwa zvekufamba kune dzimwe nyika pamwe nekumisikidza kutsva kwekugona panzvimbo inoungana vanhu. Changamire vakataura izvi.
Hawaii ikozvino iri kutevera zvinodiwa nemubatanidzwa kune vafambi vekunze vanofamba vakananga ku Aloha Nyika.
Izvi zvitsva zvinodiwa zvichatanga kushanda kutanga Mbudzi 8, 2021.
Pakufamba mudzimba, chirongwa cheHawaii Safe Travels chicharamba chiripo, uye vafambi vekunze vanopinda kune imwe nyika kune imwe nzvimbo, vanobatwa sevafambi vepamba.
Svondo rapfuura, hurumende yemubatanidzwa yakazivisa zvitsva zvinodiwa kune vafambi vekunze vanopinda muUnited States.
Kubva munaNovember 8, kubayiwa uye kuedzwa zvinodiwa zvichave zviripo kune vese vafambi vanopinda muUnited States. Nekuda kweizvozvo, Nyika yeHawaii ichaenderana nezvinodiwa nemubatanidzwa kuti vapinde muUnited States kune vafambi vekunze vanoenda vakananga kuHawaii kubva muna Mbudzi 8.
Iyo Hawaii Safe Travels Chirongwa icharamba iripo zvekufamba mumba. Vafambi vekune dzimwe nyika vanopinda munyika kune imwe nzvimbo uye vachange vachienda kuHawaii vanozobatwa sevafambi vepamba nezvinangwa zveSafe Travels Hawaii chirongwa, zvinoreva kuti vanofanirwa kutevedzera zvinodiwa nechirongwa chedu. Saka vanofanirwa kubaiwa kana kuve nePCR bvunzo isina kunaka.
Gavhuna akazivisawo kurerutswa kwemamwe matanho ekuderedza COVID-19. Ige akasaina Executive Order nhasi kuti agadzirise miganhu yenyika yekuungana, maresitorendi, mabara, nzvimbo dzekushamwaridzana, uye nzvimbo dzekurovedzera. Sechiyeuchidzo, zviitiko zvemukati mumaresitorendi, mabara, nenzvimbo dzekugara zvinofanirwa kuenderera mberi zvichida kuti vatengi varambe vakagara nepati yavo, kuchengetedza nhanho nhanhatu dzechinhambwe pakati pemapoka, usasanganise, uye kupfeka masiki nguva dzese kunze kwekunge vachidya kana kunwa.
Kushanda November 12, shanduko mbiri dzichashanda maererano nebasa rekunze uye remukati.
Chiitiko chekunze mumaresitorendi, mabhawa, nenzvimbo dzekushamwaridzana hazvichave pasi pezvirambidzo izvi.
Nezve huwandu hwezviitwa zvemukati zvine njodzi zvakanyanya, senge maresitorendi, mabara, nenzvimbo dzekugara, huwandu hwemukati hunoiswa pa50% kunze kwekunge County yashandisa mutemo unoda kubayiwa kana mhedzisiro yeCCIDID-19 mukati memaawa makumi mana nemasere. hapazovi nekukwanisa miganhu. Izvi zvinosanganisira magyms, mabara, maresitorendi, uye nzvimbo dzekugara.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Hawaii Safe Travels chirongwa, shanyira mawebsite.